Radio Hargeysa Oo Noqotay Idaacada Bisha Ramadaan Maqalkeeda lagu Afuro… | Radio Borama
You are here : Radio Borama » NEWS » Radio Hargeysa Oo Noqotay Idaacada Bisha Ramadaan Maqalkeeda lagu Afuro…
Radio Hargeysa Oo Noqotay Idaacada Bisha Ramadaan Maqalkeeda lagu Afuro…
Posted by admin on July 25th, 2013 09:58 AM | NEWS
Idaacada Radiyow Hargeysa ayaa noqotay Idaacada eedanka maqalkeeda laga afuro dhammaan dhulka Somaliland iyo deegaano kale oo ka mid ah dhulka Somalidu degto. Sida ay noo xaqiijiyeen dad badan oo aanu la xidhiidhnay tan iyo intii dib loo furay baahiyaha cusub ee Radiyow Hargeysa waa markii ugu horaysay ee bisha Ramadaan maqalka idaacadu kulmiyo dhammaan deeganada Somaliland.
Sidoo kale dhulka deegaanka Kilalka Shanaad ee Somalida Ethiopia iyo qaybo ka mid ah Somalia oo la wakhtiga ah Hargeysa ayaa ku afura eedaanka Radiyow hargeysa. C/salaan Axmed Xuseen oo ka mid ah dadka deegaan Gambadha ee Koontunta gobolka Sool, ayaa shalay isaga oo sugaya afurkii noo sheegay in ay dhegaysanayaan Radiyow Hargeysa si joogto ahna ugu afuraan. “ Walaahay hadda ayaanu sugaynaa oo waa noo joogto intan bisha Ramaadana aad ayaa loogu xidhan yahay”.
Sadam Faarax Cabdi oo isna ka mid ah dadka degan degmada Buuhoodle, ayaa isna sheegay in ay maqalkeedu joogto ku yahay. Sadam waxa uu yidhi “ dhegaysigeedu waa joogto, laakiin wakhtigan Soonka waxay dad badan oo aan eedaanka maqlayn u noqotay in ay ku afuraan”. Maxamed Cawil Sii Arag oo isna ku nool Degmada Qurilugud oo iyaduna ilaa 40kmt dhinaca waqooyi Bari ka xigta Buuhoodle ayaa sheegay in ay intan bishan Ramadaan lagu jiro ay aad ugu xidhmeen Radiyowga. Waxaana uu yidhi “ Walaahay waanu ku afuraa , casharka Sh.Cumar Dirir aad ayaanu uga dhegaysaa, wakhtigan iyadaa indho iyo dhegoba noo noqotay”.
Kilalka Shanaad ee Somalida Ethiopa ayaa ah meelaha maqalka Idaacada Radiyow Hargeysa si weyn looga dhegaysto. Faysal Xuseen oo shalay joogay deegan Gaashaamo ayaa sheegay in ay maqalkeedu si joogto ah u helaan, hase ahaatee waxa uu Faysal sheegay in ay lagu kala duwan yahay wakhtiga saacada Hargeysa iyo wakhtiga saacada Gaashaamo. Faysal waxa uu yidhi “ Walaahay way jiraan dad ku afura oo waa dadka deegamada dhinaca waqooyi ka soo xiga gaashaamo, laakiin dadka Gaashaamo waxay u arkaan in wakhtigu in yar kala duwan yahay”.
Dad kale oo ku sugan magaalooyinka Bali Dhiig, Dhoqoshay, Xaaji Saalax, Daba gorayaale iyo Bali Gubadle oo dhamaantood xuduudka Ethiopia ku teedsan ayaa sheegay in ay ku afuraan eedaanka Radiyow Hargeysa.
Dhinaca deegaamada Gobollada Awdal iyo Selel si baahsan ayey u wada gaadhay una dhegaystaan Idaacada Radiyow Hargeysa. Cabdale Cali Yusuf oo ah wariye u shaqeeya TV-ga Horn Cable oo degan Borama, ayaa sheegay inuu ku soo arkay dhegaysiga Radiyow Hargeysa meelo badan oo deegaanada gobolka Awdal iyo Selel ah.
Cabdale waxa uu yidhi “ waxaan ku arkay dhegaysigeeda Lughaya , gargaara, fardo lagu xidh iyo deegaamo kale, sidoo kale dhinaca Selel waxaan ku arkay Saylac, Boon, Xariirad iyo meelo kale. Dhammaan dhulkaa Subax iyo Galaba way dhegaystaan”.
Maxamed Cawaale Daahir oo ah wariyehayga gobolka Selel oo labadii maalmood ee u danbeeyey socdaal ku marayey deegaanada Xariirad ,Ceel gaal, C/qaadir, Jidhi, Habaas iyo laanta morohda oo dhammaantood ka tirsan gobolka Selel ayaa sheegay in ay ku afurayeen maqalka Radiyow Hargeysa. Cawaale Muuse Jaamac oo ganacsi ku haysta Laanta Morohda oo u dhaxaysa Jidhi iyo C/qaadir ayaa yidhi “ Adeer waa joogto maqalka idaacadu, wakhtigan bisha Ramadaana waxay noo noqotay in aan eedaankeeda ku afturo”. Maxamed Rayaale Rijaal, oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore oo golaha deegaanka Saylac ah oo shalay ku sugnaa Ceel gaal ayaa isna sheegay in dadka deegaanka ka baxsan magaalooyinka waaweyn ay ku afturaan Radiyow Hargeysa.
Gobolka Sanaag dhegaysiga Idaacada Radiyow Hargeysa waxa uu muhiim u yahay dad deeganada ka baxsan Ceerigaabo sida uu sheegay Ibraahim Axmed oo u shaqeeya xafiiska Bisha cas ee Ceerigaabo. Ibraahim waxa uu yidhi “ dhegaysiga Idaacada Radiyow Hargeysa waxa aad ugu xidhan dadka ka baxsan Magaalada Ceerigaabo oo ay u tahay war isgaadhsiin”. Ibrahim Axmed waxa uu intaa ku daray in dhammaan deegaanadeeda oo dhan ay joogto u tahay.
Magaalooyinka Somalida ah sida Beledweyn, Gaalkacayo, Garoowe, Boosaso, ayaa sida madax bannaan u sheegay maqalka Radiyow Hargeysa, balse dad aanu weydiinay waxay sheegeen saacada afurka lagu kala duwan yahay oo ay ku afuraan Idaacadaha FM ee deegaanadaas.
Xasan Xuseen Cabdi
« Madaxwaynaha Soomaaliya Oo Midowga Yurub Ku Wareejiyay Dhul Ay Xafiisyo Ka Dhigtaan Gudaha Magaalada Muqdisho..Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta waraaqihii dhul bixinta guddoonsiiyey Nick Westcott oo ah Agaasimaha guud ee Afrika ee Midowga Yurub, si Midowga Yurub ay xafiisyadooda u soo guuraan dalka gudihiisa oo ay si rasmi ah uga howlgalaan. “Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin siino dhul si aad xafiisyadii Midowga Yurub ay uga howlgalaan dalka gudihiisa oo ay shacabkii Soomaaliyeed u soo dhowaadaan”ayuu yiri Madaxweynaha. Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Midowga Yurub waxaan uga mahadcelineynaa sida ay marwalba u garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed, codsiga dhulkana waa calaamad tusineysa sida ay uga go’antahay inay dalka uga howlgalaan, oo ay mashaariic horumarineed oo anfacaya shacabka Soomaaliyeed uga hirgeliyaan.” Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya ay maanta mareyso marxalad ay tallaabooyin horumarineed key tallaabsaneyso maalinba maalinta ka danbeysa. Midowga Yurub marka uu si rasmi ah uga howlgallo dalkana ay kaalin weyn ka qaadaneyso sidii ay dowladda ugala shaqeyn laheyd mashaariicda horumarineed oo shaqooyinka loogu abuurayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo diyaarka u ah inay dalkooda si hagar la’aan ah ugu shaqeeyaan. Nick Westcott ayaa aad iyo aad uga mahadceliyey waraaqihii dhul bixinta oo la guddoonsiiyey, sheegeyna in Midowga Yurub uu marwalba garab taagan yahay Dowladda Soomaaliyeed oo uu hoggaamiyo Mudane Xasan Sheekh Maxamud.
Daawo Sawiradii Koobkii Ramadaanta Ee Lagu Magac Daray Jamacadii Laga Daba Dhacay Eelo Ee Ka Socday Garoonka Khayriyada Borama Iyo Kooxihii Afka Is Daray, Daldhis Vs Sh.Mahdi,Aragsan Vs Borama P.Station.. »